Kedu ihe dị ka igwe elu na kedu etu esi atụgharị ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ bụrụ na ị na-ahụkarị amụma ihu igwe ị nwere ike ịnụ banyere okwu ahụ ihe osise. Ọ bụ akụrụngwa a na-ejikarị na ihu igwe eme ihe iji gosipụta mgbanwe abụọ a kacha eji: mmiri ozuzo na ọnọdụ okpomọkụ. Igwe na-ese onyinyo bụ ihe ọ bụla karịa eserese ebe a na-anọchi anya mgbanwe abụọ a na ụkpụrụ ha.
Wantchọrọ ịma ka eserese ihu igwe si arụ ọrụ ma mụta otu esi atụgharị ha? Na nke a, anyị na-akọwara gị ihe niile 🙂
1 Njirimara nke eserese ihu igwe
2 Ngwaọrụ eji
3 Ozi agbakwunyere
4 Ikwu banyere otu ugwu
5 Climograph nke Mediterranean
6 Egwuregwu ihu igwe nke Equatorial
7 Ihu igwe
8 Gburugburu ụwa
9 Osimiri ihu igwe nke ihu igwe
10 Ihe osise polar
11 Otu esi eme eserese ihu igwe
Njirimara nke eserese ihu igwe
Na okwu sayensị ọ ka mma ịkpọ ụdị eserese a dị ka eserese ombrothermal. Nke a bụ n'ihi na "ombro" pụtara mmiri ozuzo na kwes okpomọkụ. Agbanyeghị, maka ọha mmadụ n'ozuzu ya a na-akpọ ya ugwu. Ndị mgbanwe ndị kachasị mkpa iji kọwaa ihu igwe bụ mmiri ozuzo na ọnọdụ okpomọkụ. N'ihi ya, eserese ndị a ghọrọ ihe dị oke mkpa na ihu igwe.
A na-anakọta data gosipụtara na eserese na ọdụ ihu igwe. Valueskpụrụ na-anọchite anya ya kwa ọnwa iji mara ihe ahụ na-egosi na data ahụ dị mkpa. Iji dekọọ ọnọdụ na omume nke ihu igwe, data ahụ ha ga-debara aha dịkarịa ala 15 afọ. Ma ọ bụghị na ọ gaghị abụ data ihu igwe, mana data ihu igwe.
Oke mmiri ozuzo na-egosipụta ngụkọta mmiri ozuzo nke anakọtara n'ọnwa kewara site na ọnụọgụ afọ. N'ụzọ dị otu a ị nwere ike ịma oke mmiri ozuzo kwa afọ nke otu ebe. Ebe ọ bụ na mmiri anaghị ezo mgbe niile n'otu ụzọ ma ọ bụ n'otu oge, a na-eme nkezi. Enwere data ndị na-adịghị efe iji guzobe ọchịagha. Nke a bụ n'ihi afọ ndị kpọrọ nkụ ma ọ bụ, na ntụle, oke mmiri ozuzo. A ghaghị ịmụ afọ ndị a dị iche iche iche iche.
Ọ bụrụ na ọdịdị nke afọ mmiri ozuzo na afọ ndị ọzọ mmiri na-acha bụ ihe a na-eme ugboro ugboro ma ọ bụ na-agba agba, a na-etinye ya n'ime ihu igwe nke otu mpaghara. Ihe nnochi nke okpomoku di iche kariri nke ugwu. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu usoro, a na-emeso nkezi okpomọkụ kwa ọnwa. A na-agbakwunye ma kewaa site na ọnụọgụ afọ. Ọ bụrụ na enwere eriri atọ, nke dị elu bụ nke kachasị okpomọkụ, nke etiti na ngụkọta pụtara na nke dị ala karịa nke opekempe.
Imirikiti eserese ihu igwe na-eji na Gaussen aridity index. Nkọwapụta a na-atụle na e nwere ọkwa dị larịị mgbe ọnụọgụ nke okpomọkụ karịrị okpukpu abụọ nke mmiri ozuzo.
N’ụzọ dị otu a, igwe elu igwe nwere ihe owuwu a:
Nke mbu, uzo abscissa ebe edobere onwa nke aho. Mgbe ahụ, o nwere axis ahụ na-achị achị n'aka nri ebe e debere ogo okpomọkụ. N'ikpeazụ, a na-ekpezi ihe ọzọ dị n'akụkụ aka ekpe, ebe a na-etinye ọnụọgụ ọdịda na nke okpukpu abụọ nke okpomọkụ.
N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume ịlele anya ma ọ bụrụ na enwere ike ikuku mgbe usoro ọdịda dị n'okpuru okpomọkụ. Kpụrụ igwe ha kwesiri idi nkpa iji mara uru nke ihe a. Nke ahụ bụ, ị ga-enye data ndị ọzọ dị ka ọdụ ihu igwe, ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke mmiri ozuzo tụrụ na nkezi kwa afọ okpomọkụ.
Ihe eserese ihu igwe dị ka na njedebe nwere ike ịdị iche na-adabere n'ụkpụrụ ndị ahụ. Ihe a na-ahụkarị bụ nke na-anọchi anya mmiri ozuzo site na ogwe na okpomọkụ site na eriri uhie. Nke a bụ ihe kachasị mfe. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ndị dị mgbagwoju anya karị. Ọ bụ maka ịnọchite anya mmiri ozuzo na ọnọdụ okpomọkụ na-acha anụnụ anụnụ na akara uhie. A na-agbakwunye nkọwa dị ka shading na agba. A na-acha odo odo maka oge kachasị njọ. A na-etinye ọnya acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ oji na oge mmiri ozuzo nke na-erughị 1000mm. N'aka nke ọzọ, na-acha anụnụ anụnụ kpụ ọkụ n'ọnụ ọnwa nke mmiri na-ezo karịa 1000mm nwere agba.
Enwere ike ịgbakwunye ọtụtụ ozi na chaatị ihu igwe ma ọ bụrụ na anyị chọrọ. Dị ka ihe atụ, ịgbakwunye ihe ọmụma pụrụ inyere anyị aka ịmata ọnọdụ ihu igwe nke ihe ọkụkụ na-aghaghị ịta. Nke a na-aba oke uru mgbe ị na-etinye aka na ọrụ ugbo.
A na-akpọkarị akara ngosi zuru oke Ihe ngosi Walter-Lieth. Ihe ejiri mara ya bu inwe oke oku na mmiri ozuzo nochiri anya ya. Ọ nwekwara ụlọ mmanya n'okpuru ọnwa na-egosi oge frosts na-eme.
Ihe omuma ndi ozo a nwere na ndi ozo enweghi:
nT = ọnụ ọgụgụ nke afọ na-ekiri okpomọkụ.
nP = ọnụ ọgụgụ nke afọ na-ekiri mmiri ozuzo.
Ta = zuru oke okpomọkụ.
T '= pụtara kwa afọ zuru oke okpomọkụ.
Tc = pụtara nke kachasị kwa ụbọchị okpomọkụ nke ọnwa kachasị mma.
T = pụtara nke kachasị okpomọkụ.
Osc = oscillation na-ekpo ọkụ. (Osc = Tc - tf)
t = pụtara nke kacha nta okpomọkụ.
tf = pụtara nke kachasị kwa ụbọchị nke ọnwa oyi.
t '= putara otutu okpomoku zuru oke kwa afo.
ta = zuru okpomọkụ kacha nta.
tm = pụtara ọnọdụ okpomọkụ. (tm = T + t / 2 anaa tm = T '+ t' / 2)
P = pụtara mmiri ozuzo kwa afọ.
h = pụtara awa anwụ kwa afọ.
Hs = ezigbo ntu oyi.
Hp = frosts nwere ike.
d = ntu oyi na-enweghi ubochi.
Mpaghara ojii pụtara oke mmiri.
Mpaghara nwere ntụpọ pụtara na enwere ụkọ mmiri.
Na eserese Thornthwaite e gosipụtara njirimara nke ihu igwe dị ka ọrụ nke njikwa mmiri mmiri.
Ikwu banyere otu ugwu
Mgbe anyị hụrụ chaatị ihu igwe nke otu mpaghara, ịza ajụjụ na ya ma kọwaa ya dị mfe. Ihe mbu anyi kwesiri ile anya bu uzo mmiri ozuzo. Nke ahụ bụ ebe anyị na-egosi ngụkọta mmiri ozuzo na nkesa ya n'ime afọ na ọnwa. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịchọpụta ihe ogo na ogo kacha dị ntakịrị.
Ugbu a, anyị na-atụgharị na-ele anya na usoro okpomọkụ. Ọ bụ nke ahụ na-agwa anyị ihe pụtara okpomọkụ, kwa afọ oscillation na-ekesa kwa afọ na afọ. Anyị nwere ike nyochaa ọnwa kachasị sie ike ma bụrụ nke kachasị oyi ma tụlee ọnọdụ okpomọkụ na nke afọ ndị ọzọ. Site na ikiri ihe na-eme, anyị nwere ike ịmata ihu igwe nke otu mpaghara.
Climograph nke Mediterranean
Ihu igwe anyị dị na Mediterenian nwere ụkpụrụ mmiri ozuzo na okpomọkụ kwa afọ. A na-anọchite ụkpụrụ ndị a na eserese ihu igwe iji nweta echiche nke data kwa afọ. Ihe ejiri mara ya bu inwe oke mmiri ozuzo n'ozuzu ya n'ime afo. Enwere ike ịhụ mmụba mmiri ozuzo na udu mmiri na ọnwa mmiri, yana nke abụọ kachasị na Nọvemba na Machị.
Banyere ọnọdụ okpomọkụ, ha dị nnọọ nro. N'oge oyi atụpụtaghị n'okpuru 10 Celsius ma n’oge ọkọchị ha dị ihe dịka 30 Celsius C.
Egwuregwu ihu igwe nke Equatorial
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị nyochaa ihu igwe nke mpaghara equatorial, anyị na-achọta data dị iche iche. Valueskpụrụ mmiri ozuzo dị elu n'afọ niile, dịka ọnọdụ okpomọkụ dị. Nwere ike ịhụ oke mmiri ozuzo karịa 300mm ma a na-echekwa ọnọdụ okpomọkụ kwụsie ike n'afọ niile gburugburu 25 Celsius C.
Na nke a anyị na-ahụ ihu igwe nke oke mmiri ozuzo, yana kachasị nke a ruru n'ọnwa June na July. Mmiri mmiri ozuzo a bụ n'ihi mmiri ozuzo nke ihu igwe a: monsoons. N'oge udu mmiri nke udu mmiri na-eme ka mmiri ozuzo kwụsị.
Banyere ọnọdụ okpomọkụ, ọ na-adịgide adịgide n'ime afọ na gburugburu 25 Celsius C.
Anyị nwere ike nyochaa ikpe dị iche na nke ndị gara aga. N'ime ụdị ihu igwe a, ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa nke ndị gara aga. N'oge oyi ha dị n'okpuru efu na ọkọchị ha anaghị eru 30 Celsius. N'aka nke ọzọ, mmiri ozuzo dị na ọchịchị nkịtị.
Osimiri ihu igwe nke ihu igwe
N'ebe a anyị hụrụ oke mmiri ozuzo na ọnọdụ okpomọkụ na-agbanwe agbanwe. N'oge okpomọkụ ha na-ekpo ọkụ. Otú ọ dị, ha na-ada ngwa ngwa n'oge oyi. Ọ bụ ihu igwe na-acha ọkụ ọkụ.
Ihe osise polar
Typedị ihu igwe a dị iche na nke ndị ọzọ. Obere mmiri ozuzo pere mpe ma ọtụtụ n'ime ya dị n'ụdị snow na ice. Okpomoku di oke ala n'ime afo, ya mere ha na-anọ ogologo oge n'okpuru ogo ogo.
Na ihu igwe a, mmiri ozuzo na-enye ọtụtụ ozi gbasara "akụkọ ihe mere eme" nke ebe ahụ. Mgbe snow dara, ọ na-agbakọta, na-akpụ akpụ ice. N'ime ọtụtụ puku afọ nke mkpokọta, enwere ike ịnweta klas nke na-egosi anyị akụkọ ihe mere eme nke ebe n'ime afọ ndị a niile. Nnukwu nchịkọta snow bụ n'ihi okpomọkụ na-anaghị ekwe ka ọ gbazee.
Otu esi eme eserese ihu igwe
Na vidiyo a ị nwere ike ịmụta usoro otu ị ga - esi mee eserese ihu igwe gị nke otu mpaghara:
Enwere m olile anya na iji ozi a nile ị nwere ike nyochaa oke ugwu nke mpaghara obula nke uwa. Onlykwesịrị ịkwụsị iji tụnyere ogo mmiri na ọnọdụ okpomọkụ iji mara, n'ozuzu ya, ihu igwe nke mpaghara. Ozugbo anyị matara ụkpụrụ ndị a, anyị nwere ike ịbanye n'ime ndị ọzọ dịka ikuku na ikuku ikuku.
Gị onwe gị, ọ dịtụla mgbe ị hụrụ eserese ihu igwe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Kedu ihe bụ ihu igwe ihu igwe na olee otu esi atụgharị ya?